एनएसएल फुटबलको उपाधि भिडन्त आज, कसले मार्ला त बाजी ?? - Meronews
एनएसएल फुटबलको उपाधि भिडन्त आज, कसले मार्ला त बाजी ??
मेरोन्यूज २०७८ जेठ १ गते ८:१६
काठमाडौं । नेपाली फुटबल ईतिहासमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको फ्रेन्चाईज फुटबल नेपाल सुपर लिग एनएसएलको उपाधि भिडन्त आज हुदैछ ।
पहिलो संस्करणको प्रतियोगीताको उपाधिका लागि धनगढी एफसी र काठमाडौं रेजर्स प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । जारी प्रतियोगीताको शीर्ष दुईमा रहँदै पहिलो क्वालिफायरमा भिडेका टोली अन्तत फाईनलमा पनि आमने सामने हुन लागेका हुन् ।
पहिलो क्वालिफायरमा धनगढीले काठमाडौंलाई २–१ गोल अन्तरले हराउँदै फाईनलमा स्थान बनाएको थियो । काठमाडौंले एलिमिनेटर खेलको विजेता ललितपुर सिटी एफसीलाई हराउँदै तेस्रो पटक धनगढीसंगको भेट पक्का गरेको हो ।
यसअघिका दुबै भेटमा धनगढीले काठमाडौंलाई हराएको थियो । सुदुरपश्चिमेली टोली काठमाडौंमाथी सोहि लय कायम राख्दै उपाधि हात पार्न चाहन्छ ।
धनगढीका प्रशिक्षक तोपे फुजाले काठमाडौंलाई लिग चरण र प्लेअफमा पनि पराजित गरिसकेकाले आफूहरु च्याम्पियन बन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए । तर, विपक्षीलाई दिनुपर्ने सम्मानलाई लिएर आफूहरु सचेत रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै कप्तान किरण चेम्जोङले फाइनल खेल लिग चरणभन्दा फरक हुने भएकाले आफूहरु सतर्क भएर खेल्ने सुनाए ।
काठमाडौंलाई भने अघिल्ला २ भेटमा भोगेको हारको बदला लिंदै उपाधि कब्जा गर्ने अवसर मिलेको छ । काठमाडौंका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले हार्ने मानसिकताले नखेल्ने र यसअघिका कमजोरी सुधार्दै उपाधि जित्नका लागि मैदान ओर्लने प्रतिक्रिया दिए ।
फाइनलअघि पर्याप्त आरामको समय नपाए पनि बेञ्च सशक्त भएकाले कुनै दवाव नहुने महर्जनको भनाइ थियो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने खेल साँझ साढे ५ बजे सुरु हुनेछ । काठमाडौं विकेश कुथु र धनगढी किरण चेम्जोङको कमानीमा रहेका टोली हुन् ।
लिगमा ७ वटा फ्रेन्चाईज टोली सहभागी छन् । उपाधी बिजेताले ३५ लाख र उपविजेताले १५ लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन् । व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट हुने र उत्कृष्ट युवा खेलाडीले जनही १ लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन् ।
भारतविरुद्धको खेलमा प्रशिक्षक अलमुताइरीलाइ किन प्रतिबन्ध लगाईयो ?
यसरी मनायाे नेपाली फुटबल टिमले माल्दिभ्समा दशैँ
साफ उपाधिका लागि भारत विरुद्ध खेल्दै नेपाल, कस्ले मार्ला बाजी ?
फाइनलपछि नेपाल नफर्कने अल्मुताइरी घोषणा
नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्यो